पाँचौं विवाह गरेकी चर्चित नायिकाले फेरी दिइन डिभोर्स ! – Online Marg
पाँचौं विवाह गरेकी चर्चित नायिकाले फेरी दिइन डिभोर्स !
Posted on Monday, February 3rd, 2020 11:57 AM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
चर्चित स्टार पामेला एन्डरसनले जनवरी १९ तारिखमा निर्माता जोन पिटर्ससँग विवाह गरेकी थिइन् जो कुनै जमानाका हेयरड्रेसर थिए । हलिउडकी चर्चित स्टार पामेला एन्डरसनको उक्त विवाह निजी समारोहबीच आयोजना गरिएको थियो । रोचक कुरा के छ भने पामेलाको यो पाँचौं विवाह थियो । तर विवाहको १२ दिनपछि पामेला र जोन अलग्गिएका छन् ।